Lentil na oporo - uzommeputa Como-Quiero - Como Quiero
Lentil na oporo
1 Foto Ụlọ Nga Lentil
25 grams Akwụkwọ nri
250 grams Oporo
1 ị tablespoons Scallion
Asa na lentil na a colander n'okpuru na-agba ọsọ mmiri, nyefe a ite ma tinye 2,5 iko mmiri kwa cup lentil
Igbari bouillon cube na mix. Esi nri 40 nkeji n'elu obere okpomọkụ na pan kpuchie
Iri ezi na yabasị na inine na grated karọt. idobere
Ikpo a saucepan n'elu-ajụ okpomọkụ na a iyi nke mmanụ oliv. Brown yabasị ole na ole mins, ruo mgbe ọ bụ nro, mgbe tinye karọt. Tinye na oregano, nnu, ose, na tinye. Gilding anọgide na-a ole na ole ọzọ mins, ịgbakwunye inine na nro ozugbo emenyụla ọkụ
Otutu ihe niile n'ime ite na lentil, ebido ọma ma na-anọgide na-esi nri. Mgbe lentil bụ obi n'aka kwụsịrị okpomọkụ ka nkwụnye kpuchie ite na
Nova kpochara na towel na-etinye pan n'elu-ajụ okpomọkụ. Squirt olive mmanụ. Etinye oporo. Spicing. Brown oporo 3 min kwa n'akụkụ. Ọ bụrụ na ị atọpụ a ọtụtụ mmiri, otutu ihe ọṅụṅụ n'ime ite na lentil ma laghachi ọzọ ikwommiri nke mmanụ oliv na-gilding
Jeerenụ lentil, oporo na scallions kpọwa
14% Abuba 4%
14% Carbohydrates 11%
14% Mineral 28%
14% Protein 70%
14% Vitamin 43%